Soo Saarida Warshadaha - Xuzhou Roc International Trading Co., Ltd.
Home World Group waa soosaaraha iyo dhoofinta ugu weyn ee plywood iyo badeecooyinka la xiriira ee Shiinaha, oo la aasaasay 1993 iyadoo leh 6 shirkadood. Hadda waxaan ku raaxeysaneynaa 73 khadadka wax soo saarka ee filimka soo wajahay plywood macaan plywood iyo LVL. Iyo 12 shirkad wadaag ah oo ka kooban OSB, MDF iyo wax soo saarka guddiga melamine.
ROC International waa shirkadda adeegga soo dejinta iyo dhoofinta ee Home World Group.
Wax soosaarkayaga noocyada alwaaxda oo dhami waa 1,000,000m3 sanad kasta. Ku qalabaysan mashiinno badan oo horumarsan, sandarada IMEAS talyaani ah, mashiinada hoolmay ee UROKO-da Jabaan, Veneer Joint Tenderizers iyo mashiinno waaweyn oo qalalan, shirkaddu waxay u heellan tahay soo saarista iyo dhoofinta alaabada ugu tayada sareysa filimka ay la soo gudboonaatay plywood, plywood aad u fiican, plywood-ka antiskid, MDF, OSB iyo alaabada LVL.
Ganacsiga dhoofinta, wax soo saarka alwaaxda ROCPLEX waxaa caddeeyay IS09001: 2000, IS014001: 2004, CE, FSC, BFU, JAS-ANZ waxaana si wanaagsan looga iibiyay in kabadan 100 dal oo adduunka oo idil ah, sida Jarmalka, Australia, USA, Chile, Libya, UAE, Saudi Arabia, Korea, Japan, iyo wixii la mid ah.
Suuqa maxalliga ah ee Shiinaha, shirkadda 'ROC' ee loo yaqaan 'malali' oo caan ku ah goobta dhismaha Shiinaha iyo suuqa qurxinta guriga.
Aad ku guuleysatay sharafka "Summad Caan ah oo Shiineys ah", "Alaabooyinka Tayada lagu kalsoon yahay ee Jiangsu" iyo "Dhibcaha Shirkadaha AAA".
Iyada oo ujeedadu tahay in la daboolo shuruudaha suuqa adduunka, waxaan iskaashi la yeelanay alaabada caanka ah ee jumladayaasha iyo supermarket-ka, waxaan mas'uul ka nahay naqshadeynta iyo OEM-ga looxkooda iyo alwaaxdooda.
Plywood caag ah
Qaab dhismeedka LVL
Nooca Ugu Weyn
Dhoofinta Iyo Soo Dejinta
Zhanpeng alwaax Co., Ltd.
Qalabka Dhismaha ee Senso, Ltd.